विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नया नेतृत्वलाई वर्णवालको अपिल – Nepal Reports
विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नया नेतृत्वलाई वर्णवालको अपिल
वीरगञ्ज, १० चैत । जसपा निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियन र राष्ट्रिय विद्यार्थ संघ ठाकुराम एकाई कमिटिले नवनियुक्त क्याम्प प्रमुखलाई सम्मान गरेको छ ।
मोफसलको सबैभन्दा पूरानो क्याम्पसको रुपमा परिचित ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसको प्रमुखमा नियुक्त भएका डा. उमेश चौरसियालाई जनता समाजवादी पार्टी निकट विद्यार्थीहरुले सम्मान गरेका हुन् । क्याम्पसको सभागृहमा एक कार्यक्रमका बिच प्रमुख चौरसियालाई फूलमाला तथा खादा ओढाएर सम्मान गरिएको हो ।
समाजवादी विद्यार्थी युनियन ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पस एकाई कमिटिका अध्यक्ष हरेन्द्र साहको अध्यक्षतामा क्याम्पस प्रमुख डा. चौरसिया, सहायक क्याम्पस प्रमुख सुरेश कुश्वाहा र विद्यार्थी कल्याण् प्रमुख रामबिनय यादबलाई सम्मानित गरिएको समाजवादी विद्यार्थी युनियन एकाई कमिटिका उपाध्यक्ष शशीकान्त सर्राफले बताए ।
सम्मान कार्यक्रममा क्याम्पस प्रमुख डा. चौरसियाले क्याम्पसको शैक्षिक, प्रशासन, व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रहरुमा सुधार र विकासका कार्यहरु प्राथमिकतनका साथ काम गर्ने बताए । विगतमा पटक पटक आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरुको समस्या समाधान गर्ने उनको भनाई छ ।
सो अवसरमा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रिय सदस्य निखिल वर्णवालले नवनियुक्त क्याम्पस प्रमुखलाई बधाई दिँदै डा. चौरसियाको कार्यकालमा क्याम्पसको विकासले फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गरे । क्याम्पसभित्र भएका बेथिती तथा बिसंगतीहरुको उन्मुलन गर्नुका साथै शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि गर्न क्याम्पस प्रमुखलाई अपिल गरे । आगामी दिनमा क्याम्पसको दुरावस्थाकै कारण विद्यार्थीहरु आन्दोलन तथा विरोधमा उत्रिनुपर्ने अवस्थाको सृजना हुन नदिन पनि वर्णवालले ध्यानाकर्षण गराए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ ठाकुराम एकाई सचिब महमद सागिर अलि, एकाइ सदस्य अनिष कर्ण, सदस्यहरु आविद हुसैन, जिल्ला सदस्य अर्जुन साह, सोनु गुप्ता लगायतको उपस्थिती रहेको समाजवादी विद्यार्थी युनियन एकाइ उपाध्यक्ष शशीकान्त सर्राफले जानकारी दिए ।